OMN: Simannaa KFO Nansaboo (Bit 07, 2020) – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOMN: Simannaa KFO Nansaboo (Bit 07, 2020)
OMN: Simannaa KFO Nansaboo (Bit 07, 2020)
Siyaasa kara marraa, kara maraa “Kaarramaarraa”
Kun weeraraa kun warra kaaniif araara rarra’aa!!! Namtichi gaafuma aangoo qabatu injifannoo tokkummaan Xoobbiyaa fide ka Aduwaa Oromoof (Tigiree mufachiisuuf maalif? Amaarri silumaa gahe ishee beektii injifannoon sirbuu malee injifachuu akka hin beekne ni beektii) ,ka kaarraa Maarraa Amaaraaf (Somaalee mufachiisuuf silas Somaaleen yeroo mara yoo dammaqxte dukaakiin ykn araadi yoo gad lakkisi akka isheen sirna Itiyoophiyaa kamiifuu qaawwa uumtu#remain loophole# akka taatu mufiin Muusxafee Bilxiginnaa kun waan hin oolle akkatef yeroo sanatti Naanoon Somaalee ‘paranoia state keessa waan turteef malee , qoqqoodee ture, ka Siyaad baarree Itiyoophiyaa irraa lole garuu Alii Baarkii fi ABO ture!
Harr’a fedhiin Impaayera deebisanii ijaaruu raroo ‘reform’ii jala ture waan iftoomeef malee dubbiin gaafuma “yoo duunu Itiyoophiyaa taana, yoo jiraannu Itiyoophiyaawwii taana” jedhame xumurame.
Yaa ta’u lolli Ertiraa waliinis weerara ture, Ertiraatu Itiyoophiyaa weeraree Itiyoophiyaan ofirraa deebistee,lafti Ertiraaf murtaawee Ertiraan ammoo ‘war indeminity’ beenyaa waraanaa fi badii dhaqabeef akka kaffaltu itti murtaawe! “Isuu”wajjin jaalala akka hin kunneef(not to jilt romantic politics) weerara fi injifannoo dhokata ykn ammoo injifannoo yoo jedhame ‘legacy’TPLF n boquu olqabachiisu jedhanii waan yaadaniif bara taran malee waa biraaf miti!
Yaa ta’u amma Lixa Oromiyaa , Gujii fi Boorana irratti waraana (weerara waraana saba Amaaraa) seermalee haqa malee Oromoo irratti geessaa bor injifannoo Itiyoophiyaawummaa gabbifachuuf ykn diigamsa biyyittii safisiisuuf paranoid action ta’u iyyuu araara rarra’aan namoota inocent akka Dr. Gammachuu, obbo Dinquu, qabsoftuu Ilfinesh fi art Funyee tti fayyadamuu yaaluun tokkoffaa komii koree tekinikaa araaraa darbee sana buusuu fi kana booda ajandaa araaraan waraanni ykn uummati barjaajja’u jira jedhanii ofgowwoomsuu irrati! Lamaffaa araaratti jirra maqaa jedhuun Oromomoo fi addunyaa isaan ilaaltu gara deggersa dhimma siyaasa laga abbayyaa kanatti geeffachuufi.
Yaata’u araara dhugaafi haqaa malee araarri shiraafi sobaa hin milkaayu!
Araarri jaarsa gartuu lamaanii fii ka lameen keessaa homaa hin qabne walaba ta’etu walitti dhufee akka qaama 3ffaatti dubbii qamni lameen walitti himateen taya malee garlameen keessaa tokko jaarsa filatee hin tayu! Jaarsummaan beekamtiin, ykn jaarummaan ykn qabeenyaanis miti! Jaarsummaan haqaani ! Ka haqa ilaaluu dandayutu nama haqa kennuu fi fudhachuu barbaadu walitti araarsa! Korreen araaraa haaraan kun namoota walaba ta’an ykn Oromoof quuqama qaban kan akka dr. Abbabaa, obbo Tolasaa Kishee kkn ofkeessaa qaba! Guutummaamatti shira wayiif jechuun hin danda’amu!
Garuu Oromoo qofti jaarsa ta’ee WBO fi sirna nafxanyaa walitti araarsuu hin danda’u!
Guutummaa biyyattii keessaa jaarsiif beektonni wal ijaaraanii gama lemeeniinuu jaarsa heerradhaa jedhanii araara buusuu dandayu! Araara kana kan gufachiisu inni guddaan muuxannoo qabiyyee mirgaa kanneen kana dura araaratti harka kennataniiti! Murannoo mootummaan amma kanneen kara nagaa qabsoofna jedhan ABO fi KFO waliin hojjechuuf qabu, argisiisaa jirutu murteessa! Oggansa ,miseensaa fi deggeraa nagaatti amanu hidhaa dararaa araarri WBO waliin buhu hin jiru!
Kanaaf jaarroleen quuqama qabdan ofiinis yaatahu dhiibbaa ykn fakkeessaa biraan ajandaa araaraa kana haaressitan dubbin paarlamaa keessatti dura xumuramuun waan irra tureef akka isinuu hin gaagaane of eeggannoo godhaa! Abiyyi yoo araara barbaade ,araara Itiyoophiyaa fi Oromoo gidduutti buusuu ni dandaya! Fedhiin siyaasaa araaraa fi ijaarsa sirna dimookiraasi irratti geeggeeffamu saba mara ammatuu qaba!
ONN: Midiyaan ONN kan qilleensa irraa bu’e fi;
“Bakka Dhugaan Hin Jirree, Araaras Ta’ee Wanti Biraa Hin Jiru!” Dr.Gammachuu Magarsaa